I-Juven Eyes ku-Juv - I-Airbnb
I-Juven Eyes ku-Juv
Stryn, Vestland, i-Norway
I-indlu yeholidi ephelele ibungazwe ngu-Rønnaug
U-Rønnaug Ungumbungazi ovelele
Indawo yokubuka iJuv iphakathi nendawo enhliziyweni yeNordfjord. Lapha ungakwazi ukuqasha amakhaya amaholide angokomlando ngesitayela sendabuko sase-Norwegian West Norwegian futhi ujabulele ukuthula nokuzola okuphelele. Umbono we-panoramic we-Nordfjord muhle, futhi indawo ebonakala ku-fjord ihluke ngokuphelele. Izungezwe izindawo ezidume umhlaba wonke i-Geiranger, Briksdalsbreen ne-Vestkapp, ibanga elifushane ukuya kokuhlangenwe nakho okuhle kwemvelo ukusuka eqhweni leqhwa ukuya olwandle. Samukela futhi siyajabula ukwabelana nawe nge-idyll yethu! Bona i-https: // juv.no
I-Juvsøyna iyikhaya langaphambili epulazini.
I-Utsiktshuset e-Juvsøyna iyigumbi lesikole elinomoya elingaphezu kweminyaka eyi-100 elinophahla oluphakeme, elakhiwe ngamapulangwe amakhulu elisanda kuhanjiswa layiswa e-Juv.
Ngaphakathi, kusetshenziswa opende bendabuko kawoyela welineni futhi bahlotshiswe ngefenisha ebikade isemndenini yaphinde yasetshenziswa.
Indlu inesitezi esikhulu esinegumbi lokuhlala / lokuhlala nekhishi, igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili, indawo yokugezela evulekile kanye nesitezi esincane esingaphezulu esinekamelo lokulala kanye nemibhede emi-2.
Ukuphakama kophahla olukhulu esitezi esikhulu kunikeza igumbi lokuphumula umoya opholile futhi omuhle, futhi umbono we-panoramic we-fjord uhluke ngokuphelele kuwo wonke amafasitela!
Ikamelo lokulala kanye negumbi lokugezela linendawo eningi, kanye nemibono efanayo engenakunqotshwa.
Lapha uhlala ekugcineni kwe-Juvsneset ku-panorama ngokwayo eduze ne-fjord enhle enikeza kokubili ukugeza kwasekuseni okuqabulayo nokushona kwelanga okuhle ukuze kuphele usuku. Futhi mhlawumbe kuqhamuka isikhwebu sibingelele ..
Indlu yokubuka ime "ezinyaweni zamatshe" ezimbili futhi uma lina, kuhle ukuhlala ngaphansi kwendlu futhi ubuke umdwebo we-landscape oshintsha indlela yokukhuluma futhi unikeze ukubonakala okuhlala njalo ukuya ekhaya.
E-Juv ungavakashela isitolo esincane sasepulazini, ubambe iqhaza ekuhambeni kwepulazi nabasingathi, uqashe ichibi lokubuka, uhambe uhambo oluya eJuvstøylen, uqashe isikebhe esinenjini kanye / noma uzwe umoya ngomlilo endlini yomlilo.
Ukusuka ku-Juv ungabuka i-Skåla ngombhoshongo wamatshe ongu-1843 m.o.h.
Ngokuhlala e-Juv, unethuba lokuzwa amaphuzu avelele asezingeni lomhlaba, kodwa ungathatha umhlalaphansi futhi ujabulele ukuzola nokunethezeka kokuba wedwa endaweni eyingqayizivele enikeza isipiliyoni esikabili!
Cishe isigamu sehora usuka lapho ungathatha i-Loen Skylift ukuya e-Hoven futhi uhambe imizila emihle yokuhamba ngezinyawo "kuphahla lwe-Nordfjord" lapho ubuka i-Lodalen ne-Oldedalen noma ukhwele i-Via Ferrata.
Vakashela e-Briksdalsbreen, e-Lodalen ngamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka nomlando omangalisayo noma kuthiwani "ngosaziwayo" u-Raksetra noma u-Skarsteinssetra "oyinkanyezi ezayo"?
Iziqongo ezimangazayo i-Kattanakken, i-Sundsnibba ne-Klovane ingeyakho enithanda ukugibela izintaba. I-Utvikfjellet inikezela ngendawo enhle yokuqwala izintaba kuwo wonke umuntu futhi indawo eyingqopha-mlando ehlukile i-Eggenipa imi lapho futhi ilinga ngaphezu kwentaba.
I-Geiranger ne-Vestkapp uhambo oluhle lokuya nokubuya ukusuka e-Juv nje uhambo losuku.
I-Sagastad enomkhumbi we-Myklebus ikufanele ngempela ukuvakashelwa, futhi i-Trivselsskogen inganconywa.
Unathi, uphakathi "kweso lebhotela" ukuze uthole ulwazi olusezingeni lomhlaba, lapha ungagcwalisa izinsuku ezimbalwa futhi uhlale endaweni efanayo!
Sawubona - singathanda ukuhlangana nawe uma ufika!
Bese singakuchazela ukuthi yini ebalulekile kuwena ukuze ube nokuhlala okuhle nokuphephile.
Sihlala endlini enkulu epulazini futhi siqhele ngamamitha angamakhulu ambalwa noma ucingo luvalekile uma kufanele kube nokuthile bese ibanga liba lifushane uma nihlangene. Sinesitolo esincane sepulazi samahora angu-24 endaweni engaphansi lapho sinikeza khona ithuba lokuthenga ukunambitheka kwalokho esikwenzayo epulazini - kunconywa, ukuhlala kunezela inani!
Abazithobayo, uRønnaug noPaul-Rune kwaJuv
Sihlala endlini enku…
URønnaug Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Deutsch, Norsk
Hlola ezinye izinketho ezise- Stryn namaphethelo